स्वास्थ्य – Halkaro
स्पाइनल इञ्जुरीसम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम स्पाइनल इञ्जुरी अत्यन्त महत्वपूर्ण: प्रमुख दाहाल
प्रकाशित मिति : २०७५, १४ आश्विन आईतवार October 1, 2018
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले स्पाइनल इञ्जुरीसम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम स्पाइनल इञ्जुरी समस्यामा रहेकाहरुका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । रोटरी क्लब अफ चितवनको आयोजनामा भएको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा उहाँले यसबाट पीडितहरुलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। तालिममा सिकेको सीपलाई व्यवहारमा लागू गर्दै दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन प्रमुख […]
तिनवटा लायन्स क्लवद्धारा आयोजित हेल्दी बेवी कम्पीटिशनमा:ईभा केसी प्रथम
चितवन । वालवालिकालाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ भन्ने सचेतना फैलाउने उद्देश्यले चितवनको नारायणगढमा तीन वटा लायन्स क्लबहरुको संयुक्त आयोजनामा हेल्दी बेबी कम्पिटिशन भएको छ । लायन्स क्लब अफ नारायणगढ नारायणी, लायन्स क्लब अफ नारायणगढ दियालो र लायन्स क्लब अफ भरतपुर चौतारीको आयोजनामा शनिबार भरतपुरमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा तीन वर्षदेखि ६ वर्षसम्मका एक सय १५ जना बालबालिका […]
चितवन । भरतपुर अस्पतालका नवनियुक्त प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालमा विरामीलाई लाईन बस्न नपर्ने गरी सेवादिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकताभएको बताएका छन। अस्पतालको सेवा बढाउनु भन्दापनिभएका सेवालाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै उनले सबैको साथबाट आफुले कामगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । अस्पतालमा गरिएको स्वागतकार्यक्रममा डा. पौडेलले विरामीले लाइृन बस्ने अवस्थाको अन्त्यकालागीआफ्ले पहिलो कामगर्ने बताए। नेपाल […]
चितवन । लायन्स् क्लब अफ चितवन पर्सा, लियो क्लब अफ चितवन पर्सा, कालिका मोटरसाईकल पार्टस् र उत्प्रेरणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा आईतबार खैरहनीमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। खैरहनी नगरपालिका, ८ पर्सा स्थित कालिका मोटरसाईकल पार्टस् अगाडि भएको रक्तदान कार्यक्रममा ३२ जनाले रक्तदान गरेको कार्यक्रमका संयोजक निराजन खनालले जानकारी दिनुभयो । सो रक्तदान […]
प्रकाशित मिति : २०७५, २ आश्विन मंगलवार September 18, 2018
चितवन । संविधान दिवसको अवसर पारेर चितवनमा विविध कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । सरसफाई, रक्तदान जस्ता कार्यक्रमहरु गरिएका हुन् । नारायणगढमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ८० जनाले रक्तदान गरेका कार्यक्रम संयोजक एवम् लायन्सक क्लब अफ नारायणगढ नारायणीकी अध्यक्ष अनुषा चुकेले जानकारी दिइन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार आयोजित सो रक्तदान कार्यक्रममा आठ जना महिला तथा ७२ जना […]
खोलेसिमल, चितवन। कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ खोलेसिमल बजारमा रहेको सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आयोजनामा भएको खुल्ला रक्तदान कार्यक्रममा १ सय ११ जनाले रक्तदान गरेका छन्। संस्थाको ११औं वार्षिक साधारण सभा तथा चौथो संविधान दिवशको अवसरमा आयोजित खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम भएको हो । संस्थाका अध्यक्ष शितल काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका […]
चिकित्सकहरु सडकमा, लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध स‌ंहिताको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सरकार चिकित्सकको मागमा सकरात्मक नभएको भन्दै संघले आज सांकेतिक विरोध गरेको हो । माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको विरोध र्‍याली नयाँ बानेश्वर पुगेर टुंगिएको थियो । त्यस्तै संघले आज नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ५ हजार भन्दा बढी लाइसेन्स बुझाउने कार्यक्रमसमेत रहेको […]